Fiarovana ny Ala Afrikana: Lova Navelan’i Wangari Maathai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2011 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Français, Português, Svenska, Español, English
Lasa any amin'ny varotsimifody tamin'ny 25 Septambra 2011 lasa teo i Wangari Maathai, Kenyana malaza amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy mpikatroka politika ary nahazo ny loka Nobel tamin'ny 2004. Izy no vehivavy Afrikana voalohany nahazo ny loka sady ekena manerantany ho olo-malaza ao amin'ny tahalan'ny tolona ho amin'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny tetikasa maharitra eto amin'ny kaontinanta Afrikana. Mpikambana ao amin'ny Vaomiera Misahana ny Lokan'ny Ampitson'izao tontolo izao tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa izy.
Nahazo loka i Rwanda noho ny ezaka tsy miato tamin'ny nahafahany namadika ny fihenan'ny velaran'ny fandrakofan'ny ala. Ny Filozofia tao ambadiky ny fambolen-kazo hisian'ny ala indray dia voazava tahaka izao[fr] ao amin'ny afrik.com:
Ny politikam-piaraha-monina momba ny ala any Gambia no firenena Afrikana hafa nahazo ny loka volafotsy voalohany. Eduardo Rojas Briales, Tale jeneraly lefitry ny FAO ao amin'ny Firenena Mikambana no manazava:
Nahoana moa no nahomby ka nisy fiantraikany ivelan'ny sisintaniny ny Lalàna Lacey ? Manazava i Tewolde Berhan Egziabher, tale jeneralin'ny Fahefam-Piarovana ny Tontolo Iainana any Ethiopia :
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny Lemur ahiana ho lany tamingana any amin'ny ala Malagasy indrindra fa ny Sifaka ny lalàna Lacey:
Korontana ao amin'ny tanin'i Lemur avy amin'i Erik R Patel ao amin'ny Vimeo.
Niteraka tranga diplaomatika kely ankolaka teo amin'i Frantsa sy i Etazonia ihany koa ny Lalàna Lacey, raha nanolotra gitara Gibson tamin'ilay mpihira/mpilatro sady Ramatoa voalohan'i Frantsa Carla Bruni ny Ramatoa voalohany [Amerikana] Michelle Obama. Ny mpamaham-bolongana Malagasy Avylavitra manazava ny toe-draharaha [mg]:
Midika ho ady amin'ny fianahan'ny Tanihay manerana ny kaontinanta Afrikana noho ny fiovaovan'ny toetr'andro ihany koa ny fiarovana ny ala. Ny Tetikasa Green Great Wall (GGW)[Mandabe Maitso] dia tetikasa iraisan-kaontinanta, eo ambany elon'ny Fikambanan'ny Firenena andalovan'i Sahel (CEN-SAD) sy ny Vondrona Afrikana izay hametraka etran’ (“fehikibo”) ny zavamaniry isan-karazany manana sakany 15 km mampifandray an'i Dakar amin'i Djibouti ary mahatratra 7000 km eo ho eo ny lavany.